Isitrayikhi saseLufthansa: Inqwelo moya iyenza ukuba isebenze ngeshedyuli ekhethekileyo yangoLwesine nangoLwesihlanu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Isitrayikhi saseLufthansa: Inqwelo moya iyenza ukuba isebenze ngeshedyuli ekhethekileyo yangoLwesine nangoLwesihlanu
Airlines • isikhululo • Iindaba zaseOstriya eziziiNdaba • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Safety • Iindaba zaseSwitzerland eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
ILufthansa isebenze ishedyuli ekhethekileyo yenqwelomoya ngoLwesine nangoLwesihlanu
Umbutho ozimeleyo wabahambi ngenqwelomoya (Ufo) ubize uqhankqalazo lwemihla yonke eLufthansa ngoLwesine we-7 kweyeNkanga nangoLwesihlanu we-8 kweyeNkanga. Lufthansa iyakwenza kusebenze isicwangciso sendiza esikhethekileyo phakathi kwe-1 kunye ne-3pm CET namhlanje, eya kufumaneka nge iwebhusayithi yeenqwelomoya. Abakhweli banokujonga imeko yeenqwelomoya zabo kwi-Intanethi iwebhusayithi yeenqwelomoya ngokufaka inombolo yenqwelomoya. ILufthansa iyazisola ngenkxamleko yabakhweli.
NgoLwesine, nge-7 kaNovemba, i-2,300 ye-3,000 yeqela laseLufthansa elicwangcisiweyo liza kuqhutywa. NgoLwesihlanu, nge-8 kaNovemba, iinqwelomoya zeLufthansa ze-2,400 180,000 ziya kusebenza. Ngenxa yesitrayikhi, ngeenxa zonke i-1300 yabakhweli iya kuchaphazeleka ngokurhoxiswa kwendiza eyi-XNUMX.
Iqela leenqwelo moya iEurowings, iGermanwings, iSunExpress, iLufthansa Cityline, i-SWISS, iEdelweiss, iAustria Airlines, iAir Dolomiti kunye neBrussels Airlines azizukuchaphazeleka kolo qhankqalazo. Iinqwelomoya zabo ziqala kwishedyuli. I-Lufthansa ngoku ivavanya ukuba zeziphi iindlela ezi moya zinokusebenzisa iinqwelomoya ezinkulu ukubonelela abakhweli abachaphazeleke kukhetho lwesitrayikhi.
Nokuba uhambo lwabo aluzukuchaphazeleka na ngokurhoxiswa, bonke abagibeli beQela laseLufthansa ngenqwelomoya ebhukishwe ukuya / ukusuka okanye ngeFrankfurt naseMunich ngoLwesine, ngo-Novemba ngo-7 nangoLwesihlanu, nge-8 kaNovemba banokuphinda babhukishe ukubhabha kwabo kanye simahla, kutshintshiselwano lokubhabha ngenqwelomoya yeqela laseLufthansa kwiintsuku ezilishumi ezizayo.
Abakhweli bangasebenzisa iDeutsche Bahn ukutshintshisa iinqwelomoya kwiindlela zasekhaya, nokuba indiza irhoxisiwe na okanye hayi. Abathengi banokuguqula itikiti labo libe litikiti leDeutsche Bahn phantsi ko “Ukubhukisha kwam” e iwebhusayithi yeenqwelomoya. Ke ngoko, akukho mfuneko yokuba abakhweli beze kwisikhululo seenqwelomoya. Ukugcinwa kwesihlalo kuyacetyiswa.
Abakhweli baseLufthansa abacwangcise uhambo lwangoLwesine okanye uLwesiHlanu bayacelwa ukuba bajonge inqwelomoya yabo iwebhusayithi yeenqwelomoya ngaphambi kokuqala uhambo lwabo. Abakhweli abanike iinkcukacha zonxibelelwano ezifanelekileyo baya kwaziswa ngokukuko ngalo naluphi na utshintsho olwenziwe ngeSMS okanye nge-imeyili. Iinkcukacha zonxibelelwano zinokungeniswa, zijongwe okanye zitshintshwe nangaliphi na ixesha ngokudlula iwebhusayithi yeenqwelomoya phantsi komxholo othi “Ukubhukisha kwam”. Abakhweli banokuzazisa ngotshintsho kubume babo bendiza ngeFacebook Messenger.